Ny Fijerin’Ireo Mpila Ravinahitra Ao Frantsa ny Firenena Mialoha ny Fifidianana Ho Filoham-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2017 5:04 GMT
Vakio amin'ny teny русский, čeština , English, Español, Français
Araka ny INSEE, tokony ho eo amin'ny 8,8%-n'ny mponina any Frantsa na 5,8 tapitrisa eo tamin'ny taona 2013 ny salanisan'ireo olona mpila ravinahitra. Tamin'io taona io ihany, tombanana ho eo amin'ny 3,5 tapitrisa eo ireo frantsay monina any ivelany. Nahitana fihenana betsaka hatramin'ny taona 2006 noho izany ny elanelana misy eo amin'ireo olona mpifindramonina miditra sy mivoaka any Frantsa. Na dia nampihena ny fifindra monina manerantany aza ny fivoaran'ny fisintahana (Brexit, ny fifidianana Amerikana ..) dia mbola maneho ampahany manan-danja amin'ny isan'ny mponina any amin'ny firenena tandrefana ihany ireo vondrom-piarahamonina mpila ravinahitra .
Mijery am-pahamailoana ny fiakaran'ny foto-kevitra nasionalista any Frantsa ireo mponina ireo izay ahitana an'i Marine Le Pen misongadina voalohany amin'ny fitsapan-kevitra volana vitsivitsy alohan'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Manamafy ny faharesen-dahatry ny antoko farany havanana Frantsay fa akaiky ny fotoana hakany ny fahefana ireo fandresen'i Donald Trump tamin'ny fifidianana Amerikana sy ireo mpanohana ny Brexit any amin'ny Fanjakana Britanika .
Manahy mikasika ny fahasarotana fanampiny momba ny fijanonana ara-dalàna ihany koa ilay mpianatra Danoà Iben eo amin'ny fikarakarana ny antontan-taratasy sady efa mihevitra rahateo izy fa efa somary hentitra ny dingana :
Zarain'ny ankamaroan'ireo mpila ravinahitra ity fanahiana mikasika ny olan'ny antontan-taratasy ity. Mampiseho ny fanadihadiana nataon'ny Paris21.tv fa ny fifandraisana amin'ny fitantanan-draharaha (Fiahiana ara-tsosialy, ny finday sy ny hetra) no tena fanahiana lehibe ho an'ity vondrom-piarahamonina ity (jereo ny sary etsy ambany)
Tsy mahagaga, araka ny tatitra avy amin'ny Minisiteran'ny Atitany tamin'ny taona 2012, ao Paris sy any Seine-Saint-Denis no betsaka mpila ravinahitra indrindra : miaina ao an-drenivohitra ny 307.000 amin'ireo mpila ravinahitra maherin'ny 5 tapitrisa ary any amin'ny departemantan'ny Île-de-France ny 279 000. Mbola mahavariana kokoa, ao anatin'ireo mpifindra monina miisa 230.000 tamin'ny taona 2012, 46% no avy any Eoropa, ny 30% avy any Afrika, 14% avy any Azia ary 10% avy any Amerika sy Oseania. Lahatahiry manohitra ny hevitry ny mpandala ny mahazatra elatra havanana any Frantsa ireo.
Miezaka ny hamaly io fanontaniana io ny fanadihadiana nataon'ny Paris21.tv . Hita noho izany fa afa-po amin'ny asa ataony ny telo ampahefatra amin'izy ireo kanefa nitaraina fa tsy mba “sariaka ny olona” ao an-toerana. Noho izany, mahita ireo frantsay ho “mpirehareha, tsy mba sariaka ary tsy malala-tanana” ny valo amin'ny mpila ravinahitra folo. Mampionon-tena amin'ny sakafo sy ny kolontsaina izy ireo mba handresena ireo fifandraisan'ny olona ireo izay hitany fa “mahantra“.
Nanazava ny fomba fijeriny i Samantha Brick, mpanoratra Anglisy mipetraka ao Lot ao Midi-Pyrénées:
Milaza zavatra tsara kokoa ireo mpila ravinahitra sasany, manazava ny antony mampanintona ny fiainana ao Frantsa i Bill :